Sidee loo aamusiyaa xaaladaha xiriirka ee WhatsApp | Androidsis
Sida loo aamusiiyo xaaladaha xiriirka WhatsApp
Waqti ka dib, codsiyada fariimaha degdega ah waxaa ku jira waxyaabo cusub oo gaar ah, sida mararka qaar inbadan oo kamid ah xiriiradaada ay u adeegsadaan ujeedo. Xaaladda WhatsApp waa mid ka mid ah waxyaabaha soo fiicnaanayay muddo kadib waxaana jira dad badan oo sidan u isticmaala maalin kasta.
Xaaladaha WhatsApp ayaa laga yaabaa inay xiiso leeyihiin mararka qaarkood, inkasta oo kuwa kale ay noqon karaan kuwo dhibsada, gaar ahaan haddii aadan xiiseyneynin nolosha qof kale. Waad joojin kartaa xaalada mid gaar ahaan ama mida dhowr hadii ay jiraan qoraalo badan oo aad kahesho tabka aan soo sheegnay.
Si loo aamuso xaaladaha xiriirka ee WhatsApp Waa inaad mid mid u kacdaa, in kasta oo ay taasi kugu qaadanayso dhawr ilbiriqsi midkiiba, gaar ahaan inaad hesho dadkaas sida joogtada ah u cusbooneysiiya. Waxaad sidoo kale dib u dejin kartaa haddii aad aragto inaad rabto inaad aragto waxyaabo gaar ah, adiga ayey kugu xirnaan doontaa adiga.
Haddii aad afka ka xirto Gobollada, waxaad ka heli doontaa kuwa aad ka heshay xiriiradaas oo adiga ku xiisaynaya, ha ahaadaan qoys, saaxiibbo ama dad lagu daray liiskaaga. Si loo aamusiyo xaaladaha xiriirka ee WhatsApp waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Ku fur barnaamijka WhatsApp qalabkaaga moobilka ah ee Android
Gali hadda Gobollada oo arag kuwa aadan rabin inaad aragto mid la cusbooneysiiyay, kan ugu xanaaqa badan maalin kasta
Taabo ugu yaraan dhowr ilbiriqsi oo ku dhufo «Caqiido» farriinta ku tusaysa «Ma rabtaa inaad carrab la 'gobollada ...?
Markaad Afka ku dhufato ma muujineyso wax Xaalad ah dheeraad ah illaa aad mar labaad dhaqaajiso, taas oo ay tahay inaad ku dhaqaaqdo isla tallaabadaas, laakiin xaaladdan waxaad u dhaadhacaysaa Gobollada iyo tabka oranaya "Aamusnaanta" guji xiriirka oo guji "Deactivate aamusnaanta" si waxay muujineysaa dhamaan gobolada cusub.
Codsiga WhatsApp wuxuu arkaa sida Telegram uu cagaha ugu jiro oo leh horumarinno kaladuwan, kuwa ugu dambeeya ayaa ah Codka Wadahadalka oo si fiican u shaqeeya iyo taas waxaan mar hore awoodnay inaan isku dayno. Si aad u isticmaasho wadahadalka codka waa inaad isticmaashaa Telegram Beta, maadaama ay ku jirto marxaladda tijaabada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo aamusiiyo xaaladaha xiriirka WhatsApp
Nokia 5.4 waxaa lagu dhawaaqay Snapdragon 662 iyo Android 10
Shirkadda Honor ayaa qorsheyneysa in ay soo daabusho in ka badan 100 milyan oo taleefanno ah adduunka oo dhan sanadka 2021